Nnyocha Weebụsaịtị Semalt
Inwe ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike zuru ezu adịghị mfe dịka ọ nwere ike ịnụ ụda. Ama m na ị ga-achọpụtala ugbu a. Ọ na-achọ nlele mgbe niile, ịza ajụjụ, na nyocha iji hụ na ị na-eme ihe n'ụzọ ziri ezi. Ọtụtụ oge nyocha dị otú ahụ ka mma mgbe emere ya site na ndị ọkachamara nwere ahụmịhe mara ihe ị ga-achọ na weebụsaịtị gị. Dịka ndị ọchụnta ego, anyị ji n'aka na ị kwenyela na ọ ka mma ịme ihe n'onwe gị. Agbanyeghị, ọ dịghị onye bụ agwaetiti. Iji mee ka ahụ dị gị mma, na Semalt, ị maara usoro niile anyị na-eme iji mee ka weebụsaịtị gị dị mma.
Yabụ echela ya dịka ị na-etinye ebe nrụọrụ weebụ gị mana anyị kama were ya dịka mmekorita. N'ụzọ nke a, anyị nwere ike ịnyefee ọhụụ gị nke ọma na ebe nrụọrụ weebụ gị ma hụ na ị na-ebute ụzọ nke na-ere ihe.
Iji ghọta ihe kachasị dị na njikarịcha SEO, anyị ga-atụ aro ka ị nyochaa saịtị anyị iji mụtakwuo. Anyị nwere ọtụtụ ọdịnaya mmụta iji nyere gị aka ịma otu anyị nwere ike isi nyere gị aka.
N'ebe a, anyị na-atụle ngwaọrụ niile achọrọ maka nyocha zuru oke nke weebụsaịtị. Nke a abụghị naanị nke gị kamakwa asọmpi gị. Nke a na - achọpụta ojiji nke Keywords na weebụsaịtị gị, ọ na - edobekwa okwu igodo gị. Anyị na-aga n’ihu igosi gị peeji nke ịkwọ ụgbọala gị (nke a bụ peeji nke ọtụtụ ndị mmadụ na-eleta), anyị na-ekpebikwa ọnọdụ gị na nsonaazụ ọchụchọ organic.
Mgbe anyị nyochachara asọmpi gị, anyị na-achọpụta ihe ị na-adịghị. Mụ banyere usoro mmeri ahụ na-enyere anyị aka ịghọta ihe kpatara ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke okporo ụzọ. Anyị na-etinye ihe omuma a na saịtị gị.
Anyị na-anya isi na ịkọwa na imebi ihe maka gị iji nyere gị aka ịghọta. Anyị enweghị mmasị na "m na-elele nso." Kama, anyị na-ewere nke a dịka mmekorita. N'ụzọ nke a, anyị abụọ na-agwakọta kemịkal n'ụlọ nyocha kemịkal "n'ụzọ ihe atụ," anyị ahapụghịkwa ụmụ akwụkwọ ahụ nwere uche ihe niile na-atọ ụtọ.
Site na nkọwa, SERP na-anọchite peeji Nweta Nchọpụta Nchọpụta. Ndị a bụ ibe akwụkwọ gosipụtara n'igwe ọchụchọ mgbe onye ọrụ ma ọ bụ n'ọnọdụ Semalt rịọrọ ya. Ebumnuche bụ ebumnuche nke nsonaazụ a bụ ịghọta etu esi eji isi okwu dị mma arụ ọrụ na weebụsaịtị gị.
SERP bụ kaadị akụkọ mkpokọta weebụ gị. Ọ gụnyere aha, njikọ nke ibe weebụ gị, yana nkọwa dị mkpirikpi. Nkọwa a na-egosi ebe isi okwu dakọtara ọdịnaya dị na peeji ahụ. Ihe nke a pụtara bụ na ịnweghị ike ịnwe weebụsaịtị na ahia ụgbọ ala, isiokwu gị bụ Fishe, Ocean, Aquarium, wdg ị nweta isi okwu ahụ. Kpooram ọ bụla ị jiri chọrọ dakọtara yana ọrụ ị na-enye. Ọ bụrụ na ọ bụghị, weebụsaịtị gị ga-aga n'ihu na-adọta ndị na-ege ntị na-ezighi ezi.
N'ihi nkọwa dị na akụkọ a, ọ na-abịakarị n'ọtụtụ peeji. Agbanyeghị na ị ga - egbochi ihe egosipụtara, anyị na - ahọrọ ịbanye na zuru oke, site na ịgafe ihe niile T na tigbu ihe m dere.
N'ịlele nsonaazụ a, peeji nke mbụ nwere ozi kachasị mkpa. Ka ị na-agbanye na njedebe nke akụkọ, mkpa nke data ọ nwere na-ebelata ruo mgbe ị kpebiri itinye uche gị ka ị ghara ịga n'ihu. Dịka ọ dị na mgbasa ozi ma ọ bụ n'ezie ihe ọ bụla na ndụ, ihe kacha mkpa na-ebu ụzọ.
Na njedebe, SERP na-egosi gị ọkwa nke weebụsaịtị gị na-ewere ọnọdụ na klas nke saịtị. Ma ebe ị na-ekepụta ihe na-eduga n'iji mkpụrụokwu, ị ga-aghọta ihe ị na-eme na-ezighi ezi na ihe ị ga - agbanwe. Site na ịmara ihe na-ezighi ezi, anyị maara ebe anyị kwesịrị ịrụ ọrụ.
Enwere akụkụ anọ nke SERP. Anyị enwetara mgbasa ozi a kwụrụ ụgwọ, nsonaazụ ọchụchọ ebumpụta ụwa, nsonaazụ ọchụchọ mpaghara, yana ọchụchọ ndị metụtara ya.
Adskwụ ụgwọ mgbasa ozi a kwụrụ ụgwọ: nke a bụ ụzọ iji nweta okporo ụzọ ezighi ezi. N'ebe a, ị na-akwụ Google ụgwọ iji bulie weebụsaịtị gị site na ịdọrọ uche ndị na-ekiri ya. N'ụzọ dị otú a, saịtị gị na-enweta echiche, mana nke a anaghị enweta gị oge niile. Na, enweghi nkwa na mgbe ị kwụsịrị ịkwụ ụgwọ maka mgbasa ozi ndị a, ị ga-aga n'ihu na-enwe okporo ụzọ dị elu na saịtị gị.
Nsonaazụ nchọta nke Organic: nke a ka Semalt dere ede. Nke a bụ mgbe ị na-eji SEO adọta okporo ụzọ gaa na saịtị gị dị ka eke. A na-ahụta nsonaazụ nke nsonaazụ nwere ntụkwasị obi. Site na iji ọkachamara na SEO, gig gị na-anọkarị n'elu nke ibe elu Google. Nke a na - eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị nwee ohere dị mma nke ịtụgharị aka na pịa ndị ahịa.
Nsonaazụ ọchụchọ mpaghara: ebe a, ị na-ahụ ndepụta, maapụ, na kọntaktị maka azụmaahịa dị n'etiti okirikiri ọchụchọ. Rọshịa nchọta na-ekpebi n'ọtụtụ ọnọdụ yana mmasị onye ọrụ. Nke a bụ ya mere ọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ iji guzobe n'ime ibe azụmahịa Google.
Ọchụchọ metụtara: a na-eleghara ọchụchọ ndị metụtara ya ọtụtụ oge. Ndị a bụ obere igbe ị hụrụ na ala nke ibe nsonaazụ mgbe ịchọchara ihe ọ bụla. Emepụtara ihe ndị a dabere na igodo nke onye ọrụ jiri na igbe nchọta.
Agbanyeghị, SERP nke nnukwu igwe ọchụchọ dị ka Google, Bing, na Yahoo nwere ike ịgụnye ọtụtụ atụmatụ nsonaazụ emelitere. Ha gụnyere ihe dị ka ogo snippet gị, onyonyo, maapụ, igbe azịza nkọwa, wdg.
Amakwaara dị ka eriri ọchụchọ onye ọrụ, nke a bụ okwu ma ọ bụ udiri mkpụrụokwu ndị ọrụ tinyere na igbe nchọta. Know mara otu ị ga - esi chọọ ihe ọ bụla na Google? Ka osi di, enwere otutu uzo onye oru gha acho inweta, mana a ka edobere isi okwu.
Mana ọ bụrụ na nchọta ọchụchọ tụkwasịrị obi n'ụdị onye ọrụ ji abanye naanị, ọtụtụ saịtị agaghị ahụ ìhè nke ụbọchị. Yabụ, igwe nchọta na-agbanwe algọridim ya na ọgụgụ isi nke igwe nchọta ya.
Nchọgharị ọchụchọ ahụ agaghịzi ekwe omume dabere na naanị ihe onye ọrụ na-achọ. Kama, ụlọ ọrụ na-amasị Google isi na mgbanwe ndị ọzọ. Ka oge na-aga, ihe a na-ekwu n'ebe ahụ esitela ná okwu ndị ọzọ kwekọrọ na iche echiche. N'ụzọ a, a na-edozigharị mkpụrụ okwu edokwuru, a na-egosikwa mkpụrụ edemede metụtara.
Ọdịnaya na - egosi gị otu Google si elekọta weebụsaịtị gị. Ha na-ewere ya dị ka otu pụrụ iche ma ọ bụ na ọ bụghị? N'ebe a, ị nwere ike ịlele ọnụego ole nke kọọ etu ọdịnaya gị si dị iche. Anyị niile chọrọ ịbụ ndị pụrụ iche ma ọ bụ ndị dị iche, njirimara a na-enyere anyị aka ime nke ahụ. Site na iji ọdịnaya, ị ga - amata ụdị akụkụ ederede gị, ọ bụrụkwa na ị ga - enweta ọnụ ọgụgụ nke isi.
Onweghi onye bu agwaetiti, yabụ chee ka ị hụ ihe plagiarism. Ọ bụ ọrụ anyị, agbanyeghị, ịme ederede gị ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na nke pụrụ iche. Agbanyeghi na ichota data sitere na uzo ndi ozo, igha eme ya nke gi, gbakwunye onwe gi na ndi gi na ha. Nke a na-aga ọtụtụ ụzọ n'inyere ndị na-agụ akwụkwọ gị aka ijikọ ụlọ ọrụ gị na ika gị nke ọma.
Site na iji ngwa anyị-enyi na enyi, anyị nwere ike ijikwa ọtụtụ weebụsaịtị n'otu oge. Site na ịnyefee ngalaba gị ma ọ bụ URL gị na Google, anyị nwere ike iji nwayọ soro usoro ha. Site na onye nlekọta weebụ Google, ịnwere ngwaọrụ niile ịchọrọ iji nyochaa ma melite saịtị gị. Iji nwee obi ụtọ n'ọrụ nke onye webmaster Google, ị ga-ebu ụzọ mepụta akaụntụ. Google webmaster bụ ngwá ọrụ dị mkpa maka ihe ịga nke ọma na weebụsaịtị ọ bụla. Ọ gara n’iru igosi gị otu websaịtị gị si arụ n’ekwentị na mbadamba ihe, lee saịtị ndị ọzọ na-ejikọ aka gị, ọ na-enyocha ajụjụ gị.
Kedu otu Google webmaster ga-esi nyochaa ọrụ nke weebụsaịtị gị?
O gosiputara na Google nwere ike ịnweta ọdịnaya ahụ na weebụsaịtị gị
Ọ na-enye gị ohere ịgbakwunye ma wepu peeji nke weebụsaịtị gị
Ọ na - enyere gị aka ịlele weebụsaịtị gị ma chọpụta ụzọ iji nye ahụmịhe kachasị mma maka ndị na - agụ akwụkwọ gị.
Nwere ike idobe ebe nrụọrụ weebụ gị na-akpaghasịghị ọnụnọ ya na nsonaazụ ọchụchọ.
You nwere ike ịchọpụta ma wepụ nsogbu malware ma ọ bụ nsogbu spam nke nwere ike ịdaba na mgbawa ma ọ bụrụ na achọrọ ụzọ ọzọ.
Google webmaster bụ ngwá ọrụ dị mkpa mgbe ị na-enyocha weebụsaịtị. Ọ na-egosi anyị ebe na ihe anyị ga-eme.
Nke a na-enyocha otu esi ọsọ ọsọ ibe weebụ gị. Google na-eji nyocha a chọpụta ma peeji gị ma ọ bụ weebụsaịtị gị ruru ihe Google chọrọ. N'ebe a, ị ga-egosikwa mmejọ ndị dị adị na ị ga-achọ idozi na ebe nrụọrụ weebụ gị yana otu esi eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị dịkwuo mma.
Dị ka ọ na-adịkarị, ị ga-ahọrọ weebụsaịtị nke na-ebupu peeji ọsọ ọsọ. Ihe ọ bụla dị ogologo karịa sekọnd iri na-amalite dị ka ụbọchị dum. Nke a kpatara na inwe ebe nrụọrụ weebụ na-ebu ngwa ngwa kachasị mma maka gị na ndị na-ekiri gị. Google chọrọ ka ndị ọrụ ya nwee obi ụtọ, nke pụtara na ha chọrọ weebụsaịtị ngwa ngwa. Yabụ na ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị ịdị ọsọ ọsọ dịka o kwere omume na Google ị wepụta weebụsaịtị gị. Anyị chọrọ nke a maka ebe nrụọrụ weebụ gị ịpụta na ọchụchọ ọchụchọ kachasị, na-enye azụmahịa gị ohere iji too.